Nabani na okhulayo i-roses kwi-site yakhe akufuneki ukuba athethe ngobuhle novuyo ekucingeni ubuqaqawuli beentyantyambo zabo. Kwaye ukwenza iirasi kwisayithi yakho ibonakale ikhangelekile kwaye ijabulise amehlo akho, kuyafaneleka ukuhlawula ingqalelo encinci kumbuzo wendlela yokunyamekela kakuhle i-rose rose.
Ukuqhwala rhoqo kuya kugcina i-charm ye-bush rose, kwaye iya kuvumela ukuba ihlathi likhule njengoko likhula.
Ukunciphisa ama-roses aseburhulumenteni
Ukusaqala kwentwasahlobo yithuba elona xesha lifanelekileyo lokuba wenze ukucoca okuyisiseko, okanye ngokuchanekileyo, kuyimfuneko ukulinda ukuvuvukala kweentso. Ekuqaleni, amagatsha abonakalisiweyo nabuthathakayo anqunyulwa, ngaloo ndlela ukuvula imbono yokuqhubela phambili isithsaba somthi wase-rose. Ukuba amasebe amaninzi aphazamisana omnye nomnye: ukuxubha okanye ukuwela - kufuneka umntu ashiye unamandla okanye uphumelele kwindawo. Ukuba ulahlekelwe kunye nokukhethwa kwegatsha ekufuneka kushiywe - shiya umntu ogqabileyo (eli libonisa ukuba lincinci). Musa ukushiya amagatsha aqinileyo axhomekeke kwinqanaba lesithsaba - oku kuya kuphazamisa ukuvumelanisa kwehlathi.
Ukususela kwisiseko se-rose bush kunye nengxenye engaphantsi kwamasebe amadala akhula ngamandla kunye namahlumela amaninzi, apho isityalo sisebenzisa khona amandla amakhulu. Kodwa ziyizihlumela ezona zixabisekileyo, kuba ehlobo zinika amacembe ambalwa. Xa usika izihluma, unokulawula umsizi weentyatyambo zeerhari, ixesha elide elikwinqanaba legatsha - iintyatyambo ziya kuba khona.
Xa unyamekela i-rose rose, ingqalelo kufuneka ihlawulwe kwimeko yokushiya amahlumela. Ukuba i-buds ephezulu ikhutshiwe okanye ingavuki, kufuneka ikhutshwe kwi-kidney evulekile.
Kubalulekile ukunyamekela i-rose kunye nehlobo. Qinisekisa ukuba ususe onke amahlumela afomileyo kunye namasebe, kunye neentyantyambo eziwileyo kunye ne-pedicel kumgangatho wephepha eliphezulu. Kwakhona kufuneka kuqinisekiswe ukuba isithsaba se-bush rose siphefumle kakuhle, kuba, ukuba kunyanzelekile, siphume imiphunga emfama. Oku kuyimfuneko ukukhusela ukuphuhliswa kwezifo ezahlukahlukeneyo.
Ngokude kwaye ngaphandle kwesiqhelo jikelele sesithsaba sinokususwa, unokwenza oku kwangoko emva kweentyantyambo ezinjalo kumasebe ziqala ukunyuka.
Ukuba i-rose yakho ikhula ngokukhawuleza ekuqaleni kwehlobo, ngoko isityalo siyakwazi ukukholisa kwakhona kwaye siqhakaze okwesibini. Ukumnceda kule nto, kuyimfuneko ukunqumla iintyatyambo eziwileyo kunye ne-pruner, ukusika umgca ngaphezu kwesibhakabhaka sokuqala esiqinileyo.
Ukongeza, qiniseka ukuba ususe amaqabunga kunye namaqabunga awa phantsi kwisithsaba, njengoko zikhawuleza zibole kwaye zenze igalelo ekuphuhlisweni kwezifo ezahlukahlukeneyo zesityalo kwaye ngaphezu koko, ayinakuthembeli ekubonakaleni kwendlela yokubukeka ngayo, yenza ukuba isiqithi sayo singabikho.
Kwaye imfihlelo encinane-efika kwi-rose, musa ukukhawuleza ukusebenzisa i-pruner, kwaye ulinde kancane, uqaphelisise i-rose grass and think, ngokuqinisekileyo uya kukuxelela isinqumo esifanelekileyo, kuba i-rose nganye inomntu wayo.
I-Roses iyayithanda imfudumalo kunye nokunyusa okuninzi, kodwa nakhona kuyafaneleka ukunamathela kumyinge, kuba ukunyamezela okuninzi okanye ukungabikho kwayo kuya kuba negalelo ekuphuhlisweni kwezifo zefungal kunye nezinambuzane.
Ukunkcenkceshela kuyenziwa kangangoko kusasa kusasa (ngaphambi kokuba ilanga liphakame kakhulu) okanye ngokuhlwa. Into eyona nto kukuba imini emagqabini kwakungekho namaconsi amanzi, ngaphandle koko ihlathi le-rose liza kutshisa ilanga.
Inambuzane eqhelekileyo ye-roses yi-aphids. Ukuba iikoloni zeevefi zincinci, ngoko iyakususwa ngamanzi asepha. Ukuba ukuhanjiswa kweefivesi kuye kwafikelela kwisikhulu esikhulu, ngoko isityalo kufuneka siphathwe ngamalungiselelo akhethekileyo, inambuzane. Ukongezelela, xa kuvela ii-aphid, kufuneka uhlolisise isiseko seentsiba zokuba zikhona. Ukulwa nezilwanyana, kukho iindlela ezikhethekileyo. Kwaye ukuphepha iintsholongwane kwintsimi xa unyamekela i-rose rose, umntu kufuneka ahambelane neemfuno zokugcina ezilula:
Ngokukhawuleza ukutyala izihlahla, ukususa nokutshisa iindawo ezichaphazelekayo zezityalo.
Kulo xesha, kubalulekile ukutshala izityalo kanye okanye kabini kunye neefosentirus-potassium.
Ekwindla, iifom elalayo ziphathwe ngesisombululo se-5% se-Bordeaux liquid.
Kulungile ukunyamekela i-rose rose ekwindla - oku akuyikuvelisa ukutyala, kuba ukusika iinjongo zokukhula. I-Roses kufuneka ibe yi-okuchit, kwaye sele sele isondele ngakumbi ebusika ukuze igubungele nge-heater garden.
Izityalo zase-cordillin zangaphakathi
Ukutyala kwezityalo zangaphakathi ngekhalenda yenyanga
Liviston intendelezo yangaphakathi
I-Nasturtium ngumyezo wangempela wegadi
Iintyatyambo kunye nezityalo eziphambili kunye nezityalo
Izifo zezityalo zemihlobiso
IHososope ngo-2018 ukusuka kuVasilisa Volodina
Indlela yokudala ukungcola kwindlu
Idizayini yesithelo esandiweyo kwi-batter
U-Irina Sheik njengomntwana waqokelela utamatisi waza wabhala esibhedlele
Indlela yokwandisa i-lactation
Amatyala abalulekileyo kubhinqa ngoNovemba
Isisombululo sokuzivocavoca umzimba
Indlela yokuThuthukiswa koThutho lwaseMontessori
I-calzone kunye nomhlaba kunye nama-mushroom
Amanzi okuhlambela emoyeni - umphumo wonyango womoya